DAAWO: M/weynaha Kenya oo ku dhawaaqay war ku aadan ciidamadiisa kusugan Soomaaliya, shaaciyeyna.
NAIROBI(P-TIMES) – Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo ka hadlayay magaalada Nairobi ee casumada dalkiisa ayaa shaaciyey in ay ciidamadiisa ku sugan gudaha Soomaaliya u joogaan howlgalo la xariira la dagaalanka Argagixisada iyo kuwa nabadda ka soo horjeeda, aysana u joogin howlo siyaasadeed iyo dano shaqsiyaad u gaar ah ayna ilaalinayaan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo ay katirsan yihiin.
Madaxweynaha Kenya, wuxuu sheegay in aysan ciidamadiisu ka bixi doonin Soomaaliya, isagoo sheegay in ay qeyb ka yihiin howlgalka AMISOM oo ay dhaqaalihiisa bixiyaan wadamada Reer galbeedka, isagoo tilmaamay inay doonayaan nabad ka dhalata gudaha jaarkooda Soomaaliya.
“ Marnaba qorshaha dhaw iyo kan fogba kuma jirto in ay ciidamadeenu kasoo baxaan Soomaaliya oo wali ay ka jiraan dagaalo hubeysan oo ay ku xoogan yihiin Argagixisadu, Soomaaliya waa walaalaheen oo aan caawinayno, waxaana xooga saarnaa dibu dhiska ciidamada xooga dalka” ayuu yiri Madaxweyne Kenyata.
Mr, Uhuru ayaa ka jawaabayey su`aalo ku wajahnaa in ciidamada Kenya ay ka bixi doonaan Soomaaliya, haddii ay sidaas codsato dawladda Faderaalka, balse wuxuu sheegay in aysan taasi aheyn wadiiqada rasmiga ah ee ay tahay damac shaqsiyeed.
Kenya waxay sheegtay in ay wali jiraan caqabado Soomaaliya ka haysta qorshaha kala wareega masuuliyadda ee AMISOM, oo qorshuhu ahaa in ay dhacdo 2021-ka, balse ma jirto rajo laga qabo in ay la wareegaan ammaanka dalka, sidda muuqata.
Soomaaliya & Kenya xiisad baa u dhaxaysa ku wajahan xagga Badda oo ay isku hayaan, balse caqabadaha haysta waxaa kamid ah in xariirka labada dal uu mugdi galay bilihii lasoo dhaafay oo ay Kenya sameysay talaabooyin culculus oo ku wajahan diblumaasiyadda.
Waxay u jogan somalia alana wa ogyaha anana wa ognaha. Wax uhuru laway dinayo aan ba jirin.